အိုင်တီကိုကို, Author at IT-KOKO - Page4of 17
I am just what I am! Code Ninga, Design Maker and Creative Worker. Gadgets Lover!
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, August 31, 2013
Google Nexus 7(2nd Generation) 16GB ကို $229 နဲ့ Amazon က ဝယ်ထားတာ၊ ဒီနေ့ဘဲ အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ Monday တုန်းက မှ မှာထားတာ။ 2TB HDD တစ်လုံးနဲ့တူတူမှာထားတာ၊ Nexus7 ကအရင်ရောက်လာတယ်။ Amazon က Singapore ကို $120 ကျော်ရင်လားမသိဘူး Shipping Free ရှိတယ်ဆိုတော့ သက်သာသွားတယ်။ ၂ပတ်လောက်ကြာမှ ရောက်မယ်လို့ထင်ထားတာ၊ အတစ်ပတ်အတွင်းရောက်လာတော့ တော်တော်လေး သဘောကျသွားတယ်။ Cover နဲ့ တခြားလိုအပ်တာတွေကိုတော့ Kutis မှာသွားဝယ်ဖို့ရှိတယ်။ Company ကဖွင့်ထားတဲ့ Mobile Accessories ဆိုင်တစ်ခုပါ။ ထုပ်ပေးလိုက်တာကတော့ Amazon က ထုံးစံအတိုင်း ကတ်ထူဘူးနဲ့၊ အထဲမှာတော့ Nexus& box …
အတွေး အထင် အမြင်
လုပ်တတ်ပြီးလား အလုပ်? အပိုင်း (၁)
By အိုင်တီကိုကို on Friday, August 30, 2013
အလုပ်ကရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ။ အခန်းတစ်၊ အလုပ်မှာ လုပ်စရာမရှိ မဖြစ်အောင်နေ။ များသောအားဖြင့် အလုပ်မများဘူးဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးဘဲ ဆိုပြီး ထင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လုပ်စရာ မရှိတာ မကောင်းပါဘူး။ ပိုပြီးတော့ အလုပ်များဖို့ အရှိန်ယူနေသလိုပါဘဲ။ တစ်ခုခု ကြီးကြီးမားမား လာရင် အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါ။ နောက်တစ်ခုက တခါတလေ၊ လုပ်စရာပြီးသွားလို့ ဘားမှလုပ်စရာမရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို မန်နေဂျာ၊ သူဌေးတို့မြင်ရင် အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ ထင်နိုင်တယ်။ အားနေတယ်ထင်ပြီး မဟုတ်တဲ့ အလုပ်တွေ ခိုင်းတတ်တယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်အလုပ်ကို တစ်နေ့တာ အတွက် ကြိုတင် ချိန်စပြီး လုပ်ပါ။ အချိန်ပို မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အလုပ်ကလည်းအပြီး အလုပ်ဆင်းချိန်လည်း အရောက် ဖြစ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဘဲ။ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး အရေးကြီးတယ်။ နုံသလို့ …
Facebook Shared Album
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, August 27, 2013
Facebook က feature အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shared Album ဟာ တကယ်တော့ Google+ က Party Mode လိုမျိုး Photo Album တစ်ခုထဲကို လူအများကြီး တင်လို့ရတာပါဘဲ။ event, party တွေအတွက် အကောင်းဆုံး အသုံးအဝင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Share Album အကြောင်းဟပြောရရင် တစ်ယောက်ကို ပုံ ၂၀၀ ၊ အများဆုံး အယောက် ၅၀ ထိ စုပြီး Shared Album လုပ်လို့ရပါတယ်။ create လုပ်တဲ့သူက သူကြိုက်တဲ့သူတွေကို Add လို့ရသလို့ တင်လာတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း ဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ Google+ Party Mode လိုတော့ event နဲ့ ချိန်ဆက် …
လူကို လွန်၏ မလွန်၏….
ယခုခေတ် သိပ္ပံထွန်းကားပြီး ဘာသာတရားအပေါ်ယုံကြည်မှု အားနည်းလာကြတဲ့ လူငယ်အများစုတို့က ဗုဒ္ဓတရားတွေအပေါ် “ဒီတရားတွေဟာ လူကိုလွန်တဲ့တရားတွေ လူတွေ မသိနိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့တရားတွေ” ဟု သုံးသပ်ကာ ဘာသာတရားအောက်က ရုန်းထွက်ကြတယ်… ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ် အခြားသော ဘာသာတွေမှာလဲ ဒီသဘောဟာ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်… အလယ်ခေတ်ဦးပိုင်းတွေမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့ ဘာသာတွေ အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ တချို့နေရာတွေမှာ ခေတ်မမှီသလို ဖြစ်နေတာတွေကတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်.. လူ့သမိုင်းတွေ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးတွေဟာလဲ အခုခေတ်နဲ့ယှဉ်ရင် လုံးဝ မတူလေတော့ ဘာသာတရားတွေဟာ ခေတ်မမှီသလိုဖြစ်နေပါတယ်… သို့သော် လူကိုလွန်သော တရားတွေ မဟုတ်ပါ… လူတွေလုပ်နိုင်သော အမှန်ကျင့်ကြံနိုင်သောတရားတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်… တကယ့်လုပ်သူတွေ တကယ်ရခဲ့ကြသော ငြိမ်းချမ်းမှုကို ခေတ်အဆက်ဆက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်… ဘာသာတရားမှာ မဆိုထားနှင့် သိပ္ပံတိုးတက်မှုတွေသည်ပင်လျင် အလယ်ခေတ်လူများအဖို့ လူကိုလွန်သော အရာတွေဟု ထင်နိုင်ပါသည်။ ယခုအောင်မြင်နေကြသော …
By အိုင်တီကိုကို on Monday, August 26, 2013
ဒီလကုန်ရင် ကျွန်တော် အလုပ်စလုပ်တာ ၆လပြည့်ပြီပေါ့။ ဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ သိသိသာသာကြီး ဝလာတယ်။ အနည်းဆုံး 5kg လောက်တိုးသွားတယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင် ထိုင်ရာကနေ ထတာဆိုလို့ အိမ်သာသွားတဲ့ အချိန်နဲ့ ထမင်းစားတဲ့ အချိန်ဘဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တော်တော်များများက ကွန်ပြူတာရှေ့မှာဘဲ ရှိနေတယ်။ အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ရောက်တော့လည်း ခဏလောက်ဘဲ ရေချိုး၊ ထမင်းစား ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ ပြန်ရောက်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ ရေးစရာမပြီးသေးရင် ဆက်ပြီးရေးတယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ အလုပ်မှာဘဲ အပြီးလုပ်တယ်။ အလုပ်က ကွန်ပြူတာက ကြီးတော့ ပိုပြီး အစဉ်ပြေတယ်။ အလုပ်လုပ်တော့မှ Mac ကို စသုံးတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ လက်ပေါက်ကတ်တယ်။ အခုတော့လည်း Mac သုံးရတာ ပိုကြိုက်လို့ နောက်တစ်ခါ Laptop ဝယ်ရင် Mac ဝယ်တော့မယ်။ အလုပ်အပိုင်းမှာတော့ …
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, August 25, 2013
Google Chromecast လိုချင်နေတာနဲ့ Amazon ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ အရင်လို laptop ကို HDMI cable နဲ့ TV မှာ အကြီးကြီး မကြည့်ရတော့ဘူးပေါ့။ $35 ဆိုတာ ပြောရရင် မဆိုးပါဘူး။ Youtube ပုံမှန်ကြည့်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း TV က ဘားမှ ကြည့်စရာလိုင်းမရှိတော့ အားရင် မိသားစုနဲ့ အတူတူ ကြည့်လို့ရတယ်။ Amazon ကတော့ November 01, 2013 – November 22, 2013 လောက်ရောက်မယ်လို့ပြောတာဘဲ။ စင်္ကာပူကိုတော့ ပိုပြီးနောက်ကျမယ်ထင်တယ်။ အစတုန်းက Google TV ဝယ်ချင်နေတာ ဈေးကြီးလို့ စဉ်းစားနေတာ။ အခုတော့ မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ Chromecast ဝယ်ရင်းနဲ့ Amazon …
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, August 24, 2013
အလုပ်များတာ၊ မအားတာ၊ စိတ်မပါတာ၊ ပျင်းတာ၊ မလုပ်ဖြစ်တာ၊ မလုပ်တတ်တာ အားလုံးပေါင်းပြီး ဆိုဒ်ကို ဒေါင်းနေတာ ပြန်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အရင်တုန်းက အလကား ရတဲ့ free shared hosting ပေါ်မှာ တင်ထားတာ ဟိုပြောင်းလိုက်၊ ဒီပြောင်းလိုက်နဲ့ အတည်တကျ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မရှိဘူး။ vps ကောင်းကောင်း တစ်လုံး လိုချင်နေတာနဲ့ လိုက်ရှာတာ ဈေးကြီးတာနဲ့ မဝယ်ဖြစ်ဘူး။ နောက်တော့ ကြေငြာအားကောင်းတဲ့ DigitalOcean ကိုတွေ့ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေတယ်၊ ဈေးကလည်း တစ်လ ၅ကျပ်လောက်ဆိုတော့ တတ်နိုင်တာနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်တာ တော်တော်လေးကြိုက်တာနဲ့ အရင်ကျောင်း ဆိုဒ်မှာတင်ထားတဲ့ scripts တွေ အားလုံးကို ဒီမှာ စမ်းကြည့်တော့ အိုကေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာနဲ့ အားလုံးပြောင်းဖြစ်သွားတာ။ RAM 512, …
မူရင်း မြနန္ဒာ သီချင်း
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, April 14, 2013
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီနေ့ သင်္ကြန် အကျနေ့ တောင်ရောက်သွားပါပြီ။ မြနန္ဒာ သီချင်းကို မသိတဲ့သူမရှိ ပါဘူး။ မြန်မာသံစစ်စစ်နဲ့ ဆိုထားတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းပါ။ Facebook ကို Cho TuZal တင်ထားတာတွေ့လို ကျွန်တော် ပြန်ပြီး ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းပါ ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ Man Taung Yeit Kho မူရင်းသီချင်းက ဒီမှာပါ။
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, March 31, 2013
ပထမ အစမ်းခန့် တစ်လတော့ပြီးသွားပြီ။ ထူးထူးခြာခြားတော့ ဘားမှမဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်ကလူတွေနဲ့တော့ ရင်းရင်းနီးနီးဖြစ်သွားသလို အလုပ်သဘောကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်သွားတော့ အရင်လို အလုပ်မပြီးတာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ မြန်ဆန်နှုန်းကို သိသလောက်ရှိသွားတော့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ ဘာတွေလုပ်စရာရှိလဲဆိုတာ တွေကို တန်းပြောနိုင်သွားတယ်။ အရင်တုန်းကဆို အလုပ်တစ်ခုလာပေးပြီဆို ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမဆုံးက ဒီအလုပ်က ဘာမှန်း သေချာမသိဘူး၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သေချာမသိဘူး၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကို မပြောနိုင်ဘူး။ ကိုယ်က ပြောတဲ့အချိန်နည်းသွားရင် သေပြီဘဲ။ ပြောထားတဲ့ ကြာချိန်အတွင်းမှာ ပြီးအောင် အသေလုပ်ပေတော့။ မပြီးရင် ပွစိ ပွစိ လာပြောတာ ခံရပြီဘဲ။ ကိုယ်က ပြောတာ များသွားရင်လည်း မင်းဒီလောက်တောင် ကြာသလား၊ ငါ့ client …
First wEek asacrEative Designer
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, March 13, 2013
အလုပ်များနေတာနဲ့ ဘားမှကို ကောင်းကောင်း မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အလုပ် အသစ်မှာ တော်တော်လေး လိုက်လုပ်နေရတယ်။ အလုပ်ဆို Software Development အပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Design အပိုင်းဖြစ်နေတော့ နားလည်အောင် တော်တော်လေး လိုက်လုပ်ရတယ်။ Code အပိုင်းထက် Design အပိုင်းပိုလုပ်ရတယ်။ Design တော်တော်များများ လုပ်နေရတယ်။ Graphic Design, Web Design, UI Design, Icons, Logos စတာတွေပါ လုပ်ရတော့ ကျွန်တော်လို့ လူသစ်တစ်ယောက်အဖို့ တော်တော်လေး လိုက်လုပ်ရတယ်။ Design အပိုင်းက ရင်းရင်းနီးနီးတော့ရှိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့အပိုင် အားနည်းတော့ လုပ်တာ ကိုင်တာ နှေးတာပေါ့။ ပြီးတော့ Mac OS X နဲ့ သုံးနေကြမဟုတ်တော့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက် …